မြန်မာဖြစ်ရလို့ မသိမ်ငယ်ပါနဲ့ (သို့) လက်မထောင်နိုင်အောင် လုပ်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မြန်မာဖြစ်ရလို့ မသိမ်ငယ်ပါနဲ့ (သို့) လက်မထောင်နိုင်အောင် လုပ်ပါ
မြန်မာဖြစ်ရလို့ မသိမ်ငယ်ပါနဲ့ (သို့) လက်မထောင်နိုင်အောင် လုပ်ပါ
Posted by panpan on Jul 22, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.., Politics, Issues, Society & Lifestyle | 18 comments
လက်မထောင်နိုင်အောင်လုပ် မြန်မာဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ
စာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာ စာရေးဆရာတစ်ဦး(အမည်မမှတ်မိပါ)ပြောသွားတာလေး သတိရလို့
ပြောချင်တာတွေ အမှန်အတိုင်းပြောပါတော့မယ် (မရိုက်ကြပါနဲ့နော် )
ဂျပန်ကလေးတစ်ယောက်က အင်္ဂလိပ်တစ်ယောက်ကို ပါးရိုက်လိုက်လို့ တရားရုံးမှာဖြေရှင်းရပါသတဲ့
တရားရုံးမှာ အကြောင်းအရင်းမေးတော့ ကလေးကဘာပြန်ပြောလဲ….“ကျွန်တော့ကိုကြည့်ပြီး ဟောဒီအင်္ဂလိပ်ကြီးက မင်းရုပ်က ငါတို့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးနဲ့
တူတယ်ကွ လို့ပြောပါတယ်၊ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဒါကျွန်တော့်မိဘတွေကို စော်ကားတာပဲဆိုပြီး ပါးရိုက်ခဲ့တာပါတဲ့”။ အဲလို နားထောင်လိုက်ရပါတယ်…။
အဲဒီမှာ ကျွန်မထပ်တွေးမိပါတယ်။ ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေဟာ(လူတိုင်းနီးပါးဖြစ်ကုန်ကြပြီ) တော်တော်ကို မျိုးချစ်စိတ်နည်းပါးကြတာပဲ
ဟိုနိုင်ငံကြည့်ဟိုနိုင်ငံကိုအားကျ အတုခိုး၊ ဒီနိုင်ငံကိုကြည့်ဒီနိုင်ငံကိုသဘောကျ။ ကောင်းတာတွေအတုခိုးပါလား၊ စည်းကမ်းရှိတာတွေ အားကျပါလား
ခုတော့ ဘယ့်နှယ်…လောလောဆယ် ခေတ်အထဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ကိုရီးယားအားကျတယ်။ ဇာတ်ကားတွေကြည့်ပြီးတော့။ မင်းသားလေးကချောလိုက်တာဟဲ့။
မင်းသမီးလေးဆံပင်ပုံကလှလိုက်တာ၊ ဒီတိုင်းငါလည်း လိုက်ညှပ်ဦးမယ်။ ဇာတ်ကားတစ်ကားပြီးသွားရင် မင်းသားမင်းသမီး ဖက်ရှင်တွေကျန်နေခဲ့တယ်။
ဆိုင်တွေမှာလည်း အဲဒီဖက်ရှင်ပစ္စည်းတွေ ရောက်ကုန်တယ်၊ ဘယ်မင်းသမီးလွယ်တဲ့အိတ်၊ ဘယ်မင်းသားဝတ်တဲ့ ကုတ်အင်္ကျီပုံ စသည်ဖြင့်ပေ့ါလေ။
ဒီထဲ ကိုရီးယားသရုပ်ဆောင် ရုပ်တူပြိုင်ပွဲပေါ်လာလိုက်သေးတယ်။
ကိုယ့်ကိုများ ကိုရီးယားမင်းသား မင်းသမီးနဲ့တူတယ်လို့အပြောခံလိုက်ရရင် သဘောတွေကျလို့ (ကိုရီးယားမှမဟုတ်ပါဘူး၊ ဘိုချောချောတယ်တော့…သန့်နေတာပဲ ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်)
ကိုယ်တိုင်လည်း အပြောခံရဖူးပါတယ်…ကိုရီးယားမင်းသမီး ဘယ်သူနဲ့တူတယ် ဘာညာပေ့ါ…တစ်ယောက်ပြောရင်တစ်မျိုးထွက်တယ်..တကယ်။
(စိတ်ထဲရှိလို့ပဲပြောပြော ဘာဖြစ်ဖြစ်)ပျော်တာပေ့ါ..ပျော်လွန်းလို့ သွားကိုဖြီးလို့..ကိုယ့်ချောတယ်လို့ပြောတာပဲမလား(ကိုရီးယားမင်းသမီးတွေက
ဒါပေမယ့် အဲဒီက ဂျပန်လေးအကြောင်းနားထောင်လိုက်ရတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှက်သွားတယ်
နက်နက်နဲနဲတွေးလိုက်တော့ ငါဟာဗမာလူမျိုး ငါ့ရုပ်ဟာ ဗမာရုပ်ပဲဖြစ်ရမှာပေ့ါ (တချို့ လူဝင်စားတွေတော့ ရှိမှာပေ့ါလေ)
ဒါကိုငါက ဘာလို့ကိုရီးယားနဲ့တူချင်ရတာလဲ၊ ဘာလို့ဂျပန်မလေးလို ချောချင်ရတာလဲ၊ အင်္ဂလိပ်မတွေရဲ့ ရုပ်ရည်မျက်နှာပေါက် လိုချင်နေရတာလဲ
ကျွန်မရုပ်ကိုတောဆန်တယ်လို့ ပြောတဲ့လူလည်းရှိတယ်(ဘယ်လိုတောဆန်တာလဲဆိုတော့ အညာသူရုပ်မို့လို့တဲ့၊ ဗမာရုပ်တော်တော်ပေါက်တယ်တဲ့)
အလို…..အဖေဗမာ အမေဗမာ၊ ဗမာစစ်စစ်ကြီးတွေမွေးတာ ဗမာရုပ်ပဲပေ့ါ၊ ဗမာရုပ်ကတောဆန်တယ်ဆိုတော့ တို့မြန်မာနိုင်ငံက ဗမာလူမျိုးတွေရော၊
တိုင်းရင်းသားတွေရော တောရုပ်တွေပေ့ါ (တောမဆန်အောင် ဘိုရုပ်ပဲပေါက်ရမလို)
နိုင်ငံခြားကားတွေကြည့်ပါ…အဲဒီမှာ သူတို့ရဲ့ လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်ဟာ ဘယ်လိုလဲ…ဆင်းရဲသူဖြစ်ဖြစ် ချမ်းသာသူဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုစည်းကမ်းရှိလဲ
လမ်းတွေအိမ်တွေကိုကြည့်ပါ၊ ဆက်သွယ်ရေးတွေလေ့လာကြည့်ပါ… အဲဒီအခြေခံလေးတွေပဲကြည့်ပါဦး..အပင်ပန်းခံလေ့လာစရာမလိုပါဘူး၊
ခုရေပန်းစားနေတဲ့ အချစ်တိုက်ပွဲ (City Hunter)ဆိုတဲ့ကိုရီးယားဇာတ်ကား။ ဒီဇာတ်ကားကြည့်ရတာ တန်တယ်။
မင်းသားချောလို့မဟုတ်ပါ၊ မင်းသားချောတာလိုက်ကြည့်နေရင် အချိန်ကုန်ငွေကုန်ပြီး ဘာမှကျန်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဇာတ်ကားက နိုင်ငံရေးကားပါ။ အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ မြှပ်ကွက်တွေ၊ အချင်းချင်းမသမာမှုတွေ၊ လာဘ်စားမှု၊ အလွဲသုံးစားမှု အစုံပါပါတယ်။
ပြည်သူလူထုနဲ့ အစိုးရကြားမှာ လွတ်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်
ကျွန်မတို့ဆီမှာရော….ဒီလိုဇာတ်ကားမျိုးရိုက်နိုင်ပါ့မလား၊ ရိုက်ခွင့်ရှိမလား၊ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့ ကြွေးကြော်ထားတော့
ဒီမိုကရေစီပီသစွာ ခွင့်ပြုနိုင်ကြောင်း မျှော်လင့်မိပါတယ်(ဒီမိုကရေစီရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်လွန်းလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါ)၊
ဒီCity Hunterဇာတ်ကားမှာ တရားရေးအရများစွာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိတာ တော်တော်သဘောကျမိပါတယ်
ကျွန်မအတွေ့အကြုံနုပါတယ်၊ အသက်ကလည်းငယ်တော့ ရှေ့မှီနောက်မှီလည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ နိုင်ငံရေးကိုလည်း နားလည်လွန်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး၊
သူများနိုင်ငံမှ ကောင်းကွက်လေးတွေ၊ ဆိုးကွက်လေးတွေကို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကနေ လေ့လာနိုင်လို့ လေ့လာမိသလောက်ပြောချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
ပြီးတော့ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ငယ်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်
ကိုယ်ပိုင်“စာ”ရှိပါတယ်၊ ကိုယ်ပိုင်ဗျည်းနဲ့ သဒ္ဒါနဲ့ပါ၊ ကိုယ်ပိုင်“ဂီတ” ကိုယ်ပိုင်“ယဉ်ကျေးမှု”နဲ့ပါ။ ဒါဂုဏ်ယူစရာပါ။
အဲဒါကိုနိမ့်ကျစရာရယ်လို့ တွေးနေပြီး တခြားနိုင်ငံကဟာတွေအားကျပြီး မလိုတာတွေလိုက်အတုခိုးလို့ကတော့ ရှက်စရာကောင်းလှပါတယ်
မြန်မာလူမျိုးဟာ မြန်မာလူမျိုးရယ်လို့ လက်မထောင်လိုက်ပါ (လက်မထောင်နိုင်လောက်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေလည်းလုပ်ပါ)
တချို့ဆို ကိုယ့်နိုင်ငံကလူထက် တိုင်းတပါးသားကို ပိုရိုသေချင်နေတာကလား
ဒီလိုသာဆိုရင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့လို -ာနိုင်ငံဖြစ်တော့မှာပဲလို့ တွေးမိရင်း…ရင်လေးမိပါတယ်
မြန်မာ ပါဆိုမှ မြန်မာ ရုပ်ပဲ ဖြစ်ရမှာပေါ့
ဘယ်နှယ့်လုပ် ကိုယ့်အဖေ ကိုယ် မှ အားမနာ ။ တစ်ခြား လူမျိုးရုပ် ထွက်ချင်နေလို့ မသင့်တော် ဘူးပေါ့ ။
အခုဆိုရင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ အမျိုးသမီးတွေ များမယ် ထင်ပါတယ် ။
မျက်နှာကို ပလစ်စတစ် ဆာဂျရီ နဲ့ကိုရီးယား ရုပ်ပေါက်အောင် ငွေကုန်ခံ ၊ အသားအနာခံ ပြင်ကြတာ ကို တွေ့ ကြရမှာပါ ။ ကြားကြရမှာပါ ။ အားမပေးပါဘူး ဗျာ ။ အက်စီးဒန့် တစ်ခုခု ဖြစ်သွားလို့၊ မျက်နှာမှာ ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရသွားလို့ နဂိုရုပ် ပြန်ဖြစ်အောင် လုပ်တာ ဆိုရင် ဟုတ်သေး ။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် ဖတ်ဖူးတဲ့ ဟာသလေး တစ်ပုဒ် ကို ပြန်ရှဲ ပေးလိုက်ချင်ပါတယ် ။
“ ရည်ရွယ်ချက် ”
ကြက်မွေးမြူ ရေးခြံ တစ်ခု တွင် ကြက်မ တစ်ကောင်က ငှက်ကုလားအုတ်ဥ အရွယ် ဥ တစ်လုံး ကို ဥလိုက်သဖြင့် အားလုံး အထူးအဆန်း ဖြစ်ကုန်ပြီး ၊ တီဗီချန်နယ် တစ်ခု မှ လာရောက် အင်တာဗျူးသည် ။
“ မကြက်မ အနေ နဲ့ အခုလို ဥ ဥပြီး တော်တော် ဂုဏ်ယူ ဝမ်းသာမိမှာပဲနော် ။ နောင်ဆက်လုပ်မယ့် ရည်ရွယ်ချက်လေး ကို ပြောပြပေးပါဦး ”
“ အနာဂတ် မှာ ဒီ့ထက် ပိုကြီးတဲ့ ဥ တွေ ဥ နိုင်ဖို့ ကြိုးစားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ”
ထို့ အပြင် ကြက်ထီး ကို လည်း ဆက်လက် မေးမြန်းရာ
“ ကျုပ် အခု အခုန် ကျင့်နေတယ် ”
“ ဘာကြောင့် အခုန် ကျင့် ရတယ် ဆိုတာကို သိပါရေစေ ”
“ ကောင်းကောင်းကြီး ခုန်နိုင်ပြီ ဆိုတာ နဲ့ဟိုခွေးသူခိုး ငှက်ကုလားအုတ် ကို ခုန်ထိုးမယ် ၊ ဒါပဲ ”
အော်….ကြက်မကကြက်ဥမဥတာ ၀င်ပြီးမြှောက်တဲ့ အင်တာဗျူးကရှိသေးတယ် (သူတို့ကြောင့်လည်း အများကြီးပါတယ်)
မြန်မာဖြစ်ရတာကို ကျေနပ်ပါတယ် ။ ဂုဏ်လဲယူပါတယ်
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့ ကြွေးကြော်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လုပ်ချင်တာ
လုပ်ခွင့်မရတာကတော့ ဘာကြောင့်မှန်းမသိပါဘူး …..
City Hunter လိုကားမျိုးမပြောနဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ နည်းနည်းညှိတဲ့ ကားမျိုးတောင်
ရိုက်ခွင့်မရတာ မြန်မာပြည်အတွက် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမူဆိုတာ
မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ ဝေးနေဆဲပါ ………
ပြီးတော့ တကယ်လည်း ဟာသမြောက်တာရှားတယ်
လူတွေကလည်း ငွေကုန်အချိန်ကုန်ခံပြီး ဒီကားတွေပဲကြည့်နေတယ် (ဒါတွေပဲရှိတာကိုး)
ပြီးတော့ အပြင်မှာစိတ်ညစ်သမျှ ဟာသကားကြည့်ပြီး ရယ်ရရ မရယ်ရရ အော်ရယ်ပစ်လိုက်ရော
“တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ မသွေ” လို့နိုင်ငံတော်သီချင်းမှာ ပါနေတာကြာပါပြီ……
မနွယ်ပင်ရေ………ချမ်းချမ်းရဲ့ မျှော်လင့်ရင်း ဝေး ဖြစ်နေတယ်
ဒါကတော့ သူများနိုင်ငံတွေ အားကျပြီး လွှမ်းမိုးလာတဲ့ ကိုရီးယား၊ တရုတ်အခွေတွေ အတုခိုးတဲ့နေမယ့်အစား ကိုယ်ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကို တန်ဖိုးထားနိုင်ရင်တော့ လက်မထောင်နိုင်မယ့်သူတစ်ဦး ဖြစ်လာမှာအမှန်ပါပဲ။
ဟုတ်တယ် ဗမာဖြစ်တာဘာသိမ်ငယ်စရာရှိလဲ စာများများသင် အသိဥာဏ်ရှိသူဖြစ်အောင်လုပ်
ဘယ်နိုင်ငံဆိုဆို အတိတ် သမိုင်းကြောင်းတွေနဲပဲ ခက်ခဲတဲအချိန်လွယ်ကူတဲ အချိန်တွေရှိကြတာပဲ
အခု မြန်မာနိုင်ငံက ခက်ခဲတဲအချိန်ဆိုရင် နောင်တစ်ချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက လက်မတောင်နိုင်တဲအချိန်မရှိနိုင်ဘူးလား
ထိုင်းကား၊ ကိုရီးယားကား၊ တရုတ်ကား၊ ကုလားကား ဘယ်ဟာကြည့်ကြည့်ဗျာ သူတို့ရိုးရာကို မပျောက်စေရဘူး။ အရမ်းထိန်းသိမ်းတယ်။ မြန်မာကားကြည့်မိပါတယ် ဘယ်နေရာရယ်ရမှန်းမသိ…
တစ်ခါတစ်လေတစ်ကားလုံးသာပြီးသွားတယ် ဘာကိုဖော်ကြူးပြသတာလဲဆိုတာ နားမလည်လို့ မြန်မာ လိုစာတမ်းထိုးခိုင်းရမလားပဲ…….
Khon Yenaung says:
လက်ရှိ အခြေအနေက စပြီး ကြိုးစားကြရအောင်။
ဘယ်သူဘာပြောပြော မြန်မာဟာ မြန်မာပါဘဲ။
ကိုယ့်လက်မ ကို ကိုယ်အရင်ထောင်ကြည့်ကြရအောင်။
တစ်ဦးချင်း စီ လက်မထောင်နိုင်မှ တစ်မျိုးသားလုံး လက်မထောင်နိုင်မှာပါ။ ။
ကိုယ့်လက်မကိုယ် အရင်ထောင်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အရင်ဆုံး ပြုပြင်ရမှာပါ
နိုင်ငံခြားသားတွေ ဘာလို့မြန်မာလူမျိုးဆိုရင် အထင်သေးကြတာလဲ
နိုင်ငံခြားရောက်ရင် မြန်မာတွေ ဘာလို့အနှိမ်ခံရတာလဲ
အဲလိုအထင်းသေးစေအောင် မိမိတို့အနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်မိကြပါသလဲဆိုတာ ပြန်စဉ်စားရပါမယ်
ခုတော့ မြန်မာလူမျိုးတချို့ဟာ အနည်းဆုံးတော့ လစ်ရင်လစ်သလို လုပ်ကြတယ်ရယ်လို့ အထင်ခံရပါတယ်
တကယ်လုပ်တဲ့လူမရှိဘဲ အကြောင်းမဲ့တော့ ဘယ်သူမှအဲလိုမထင်ကြပါဘူး
လက်မထောင်နိုင်အောင်လည်း လက်မထောင်နိုင်တဲ့လုပ်ရပ်တွေ လုပ်ပြနိုင်မှ တကယ်လက်မထောင်နိုင်မှာပါ၊ အဲဒါမှ မျက်နှာမငယ်ရမှာပါ
တစ်မျိုးသားလုံးလက်မထောင်နိုင်အောင် တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အကျင့်ဆိုးလေးတွေ ပျောက်အောင်လုပ်နိုင်ရင် Khon Yenaungပြောသလို ဖြစ်လာရမှာပေ့ါရှင်
ဟုတ်ပ အဲဒီကားကို ကြည်ရတာ တန်ပါတယ်…
အဲလို လေးတွေကို အတုခိုးသင့်တယ်.. ပြီးတော့ ဆက်သွယ်ရေး ကိရိယာတွေနဲ. လူနေမှု အဆင့်အတန်း.. ဥပဒေရေးရာနဲ. အားလုံးအားလုံးပါပဲ…
ဒီက မြန်မာကားတွေများ Laptop လေးတစ်လုံးတောင် ထည့်မရိုက်နိုင်ဘူး ipad တို. Housing Electronic System တို. ဆို ဝေလာဝေး…
ခေတ်မှီတယ်ဆိုတာ အဲဒါပြောတာ.. မဟုတ်တာသာ လိုက်အတုခိုးနေကြတာ…. မပြောချင်ဘူး…
မှန်တဲ့ အတိုင်း ကိုယ့်အမြင်ကို ပြောရရင်ဖြင့် မြန်မာဟာ တစ်ဖြေးဖြေး ဆိပ်ကမ်းနဲ့ တူနေပြီ..။ သင်္ဘောတစ်ကာ လှေတစ်ကာ ၀င်ထွက်သွားလာပြီး ထားရစ်ခဲ့တဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေ အညစ်အကြေးတွေနဲ့ ဆပ်ကမ်းဟာ ပျော်ပါးနေသလိုသာပါ့..။ အင်းလေ… သူကိုယ်တိုင်မှ မလုပ်နိုင်ပဲကိုး..။။
တရုတ်က လေလံဆွဲမယ်ဆိုရင်တော. အဟင်. အဟင်.
ကိုယ့် ကိုယ်ကို မြန်မာဆိုပြီးဝန်မခံချင်တဲ့၊ ၀န်မခံရဲတဲ့ သူတွေ တနေ့တခြားပေါလာပါတယ်။ မောင်မိုးညိုတို့အလုပ်မှာ မြန်မာပြည်မှာဖွားပြီး အမေရိကားမှာကြီးတဲ့ သူတယောက်က သူအလုပ်ဝင်စမှာ တိုးတိုးတိပ်တိပ် လာပြောပါတယ်။ သူရောသူ့မိဘတွေပါဗမာတွေပါတဲ့။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်ရှင်ကိုတော့ တရုတ်ဘဲ ပြောထားကြောင်းဗြောင်ဘဲပြောပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲမေးတော့ မေးခွန်းဇယားရှုတ်လာမှာစိုးလို့ပါတဲ့။ နောက်တယောက်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်ကရောက်လာပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားကို ဟန်ကျပန်ကျတောင်မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ အဲ..ဒါပေမဲ့ သူပြောပုံကိုကြည့်။ ဗမာတွေနဲ့ သိပ်မရောဘူးတဲ့။ သူ့ကလေးအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာကြည့်ပြီး ဂုဏ်ယူတယ်တဲ့။ ဗမာလိုမပြောတတ်လေကောင်းလေဆိုဘဲ။ ဗမာမုန်းတီးရေးစိတ်ဓါတ်ကိုရိုက်သွင်းထားတယ်တဲ့။ ဒါသူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံတာနော။ ခေသူမဟုတ်တွေပါ။ အယ်လ်အေနားမှာနေတဲ့ တယောက်ကတော့ ပြီးခဲ့ တဲ့ အယ်လ်အေသကြန်
ကိုလာပါလားလို့ပြောတော့…ဘာပြောတယ်မှတ်သလဲ….အဲ့ဒီနေ့မှာ soccer game ကြည့်မလို့ပါတဲ့။ သူတကြိမ်ရောက်ပါပြီတဲ့။ ဘာပြောချင်သလဲ။
ဒီလိုရှိပါတယ်။ အမျိုးချစ်ရမယ်လို့ များများပြောရလေ၊ အမျိုးချစ်တဲ့ စိတ်နည်းပါးလာလေဆိုတာ၊ ဗမာမှမဟုတ်ပါဘူး လူသားတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်တလွှားလမ်းဆုံလမ်းထောင့်တိုင်းမှာ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေ တွေ့ပါလိမ့်မယ်…အမျိုးကိုချစ်ကြပါလို့ အမွှန်းတင်တဲ့ ကြွေးကြော်စာတွေ။ အစိုးရက ဒါတွေ အားလုံးကို မောင်ပိုင်သိမ်းထားပါတယ်။ ဆိုလိုတာက မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာ အစိုးရကသတ်မှတ်ပေးရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်ကရှိနေသင့်တဲ့ အရာပါ၊ မွေးမြူယူရတဲ့ ကိစ္စမျိုး၊ သင်တန်းတက်ပြီးယူရတဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုးလဲမဟုတ်ပါဘူး။ အမေရိကန်မှာ လွတ်လပ်ရေးနေ့…အခြားနေ့ထူးတွေမှာ အိမ်တွေ ကားတွေ မှာ အမေရိကန်အလံကိုလွှင့်ကြပါတယ်။ အလံပါတဲ့ အ၀တ်အစားနဲ့ အခြား သရုပ်ဖေါ်တွေ တန်စာဆင်ဝတ်ဆင်ကြတယ်။ ဒို့က အမေရိကန်ကွလို့ ဂုဏ်ယူပြောကြတယ်။ ဒီလိုပြောဘို့ လုပ်ဘို့ ဘယ်အစိုးရဥပဒေက တိုက်တွန်းတာမရှိပါဘူး။ ဘယ်သူကမှဓါးမိုးပြီးမခိုင်းပါဘူး။ ကိုယ့်အသိစိတ်ဓိတ်နဲ့ လုပ်ကြတာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ Census 2010 မှာကြည့်ကြပါ။ မြန်မာတိုင်း ပုံစံဖြည့်ပြီးပြန်ထည်ူ့ကြသလား။ အဲ့ဒီမှာရော မြန်မာ ဆိုပြီးလူမျိုးစုမှာဖေါ်ပြသလား။ မထင်။ အဖြေကရှင်းပါတယ်။ ကာလီဖိုးနီးယားတခွင်မှာတောင် မြန်မာ သောင်းခုနစ်ထောင်ဘဲ စာရင်းပေါက်ပါတယ်။ ငါးသောင်းလောက်တော့မှန်းတာပေါလေ။ Census complete count Burmese committee မှာပါတဲ့ ကော်မီတီဝင်လူကြီးမင်းတယောက်ကတောင်၊ သူ့အနေနဲ့ အဲ့ဒီပုံစံကိုဖြည့်ပြီးအကြောင်းပြန်မပြန် မသေခြာဘူးဆိုဘဲ။ တိုင်းရင်းသားတွေ ကလဲ ဗြောင်ဘဲ ပြောတယ်။ မြန်မာ လို့မထဲ့နိုင်ဘူးတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ က မြန်မာမဟုတ်လို့တဲ့။
ဒီတော့…..ပုံသေနည်းတခုထွက်လာပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြန်မာဆိုတာဂုဏ်ယူကြပါ၊ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုချစ်ကြပါ၊ ကိုယ့်အမျိုးကိုချစ်ကြပါ များများပြောရလေ၊ အဲ့ ဒီလူမျိုးမှာ လူမျိုးချစ်စိတ်၊ ဂုဏ်ယူလိုစိတ် ခေါင်းပါးလေဆိုတာပါဘဲ…..။
မြန်မာ နှစ်ယောက်ရှိရင် အဖွဲ့တဖွဲ့ထောင်တာကိုကြည့်ကြပါ….။ ဘယ်လောက်ညီညွတ်ကြသလဲလို့။
I really appreciate & agree your comment,
If I have to say, I will argue about one thing, the real saying is,
“မြန်မာ နှစ်ယောက်ရှိရင် အဖွဲ့သုံးဖွဲ့ ( three group ) ထောင်တာ”
Whatagreat unity !!!
– ဗမာတွေနဲ့ သိပ်မရောဘူးတဲ့။ သူ့ကလေးအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာကြည့်ပြီး ဂုဏ်ယူတယ်တဲ့။ ဗမာလိုမပြောတတ်လေကောင်းလေဆိုဘဲ။ ဗမာမုန်းတီးရေးစိတ်ဓါတ်ကိုရိုက်သွင်းထားတယ်တဲ့။
( ခေသူမဟုတ်တွေပါ )
– တိုင်းရင်းသားတွေ ကလဲ ဗြောင်ဘဲ ပြောတယ်။ မြန်မာ လို့မထဲ့နိုင်ဘူးတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ က မြန်မာမဟုတ်လို့တဲ့။
Dear villager, Please, don’t easily blame those individual persons,
They not only အထင်သေး but also မုန်းတီး to Myanmar.
Please find out the root cause of problem !!!
Which make them to say by this way ???
( My confession ; My family also try not to mix up with Myanmar Community ( ဗမာတွေနဲ့ သိပ်မရောဘူး ), But, my situation is different, I just hate the jealousy & gossip of Myanmar Community )
– မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာ အစိုးရကသတ်မှတ်ပေးရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်ကရှိနေသင့်တဲ့ အရာပါ၊ မွေးမြူယူရတဲ့ ကိစ္စမျိုး၊ သင်တန်းတက်ပြီးယူရတဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုးလဲမဟုတ်ပါဘူး။
– ဒို့က အမေရိကန်ကွလို့ ဂုဏ်ယူပြောကြတယ်။ ဒီလိုပြောဘို့ လုပ်ဘို့ ဘယ်အစိုးရဥပဒေက တိုက်တွန်းတာမရှိပါဘူး။ ဘယ်သူကမှဓါးမိုးပြီးမခိုင်းပါဘူး။ ကိုယ့်အသိစိတ်ဓိတ်နဲ့ လုပ်ကြတာပါ။
– ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုချစ်ကြပါ၊ ကိုယ့်အမျိုးကိုချစ်ကြပါ များများပြောရလေ၊ အဲ့ ဒီလူမျိုးမှာ လူမျိုးချစ်စိတ်၊ ဂုဏ်ယူလိုစိတ် ခေါင်းပါးလေဆိုတာပါဘဲ
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေး ခွဲခြားမှု ဟာသမိုင်းနဲ့ ချီပြီးရှိခဲ့ တာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကလွဲရင် ဘယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များက အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို ဟက်ဟက်ပက်ပက် လုပ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ လုပ်ခဲ့ရင်လဲသကာရေလောင်းတဲ့ ဟန်ပြ လုပ်ရပ်တွေဘဲရှိပါတယ်။ ဒီကစတဲ့ တိုင်းရင်းသားချင်း ယုံကြည်မှုကင်းတဲ့ သမိုင်းကြောဟာ ဒိနေ့အထိ တင်းမာမှုမလျော့သေးတဲ့ သက်သေအနေ နဲ့ မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်၊ ဘင်္ဂလားဒေရ်ှနယ်စပ်တွေ မှာ ရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားပြောင်းရွှေါခိုလှုံ စခန်းတွေ ကိုပြနိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့ “ငါကဗမာမှမဟုတ်တာ” ဆိုတဲ့ စကားရဲ့နောက်ကွယ်မှာ များစွာသော နာကျည်းခံစားချက်တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာနားလည်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ က အတုယူမှားနေတာပါ … ကောင်းတာကို မယူပါဘူး မကောင်းတာပဲယူတယ် ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူများနောက်လိုက်ပဲ .. ကောင်းတာတွေ့ရင် ကော်ပီကူးတယ် … ကိုယ်တိုင်ဘယ်တော့မှ အသစ်မလုပ်ဘူး …… အသစ်တော့လုပ်တယ် ……ကလေးမွေးတာတို့ မိန်းမပျိုလေးတွေ ပိုးပန်းတာတို့ နဲ့ပဲအချိန်ကုန်တယ် .. အခုခေတ်က လူငယ်တော်တော်များက လူလို့တောင် ခေါ်စရာမကောင်းတော့ဘူး အိပ်စားကာမ ပဲရှိတယ် …. အချို့ကပိုသေးတယ် သောက်စားကာမ လောင်းကစား ပြသာနာရှာ .. နောက်တက်တွေကတော့ မတွေးဝံစရာပဲ … ဘယ်တော့ သခင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး … သူများနိုင်ငံသွားပြီးကျွန်ပဲ ဖြစ်မယ် ..